विकिमिडिया फाउन्डेसन निर्वाचन/२०२१ - Meta
विकिमिडिया फाउन्डेसन निर्वाचन/२०२१
२०२१ को बोर्ड अफ ट्रस्टी निर्वाचन आगामी ४ अगस्ट २०२१ देखि १७ अगस्ट २०२१ सम्ममा हुनेछ। विकिमिडिया समुदायका सदस्यहरूले तीन बर्षको अवधिको लागि चार उम्मेदवारहरू छनौट गर्ने अवसर पाउँछन्। २०२१ जुन ९ देखि उम्मेदवारीको लागि आह्वान खुला गरिएको छ।
४.२ निर्वाचन स्वयंसेवकहरू
अघिल्लो मतदानमा मतदाताको सङ्ख्या विश्वव्यापी रूपमा करीब १०% थियो। निर्वाचन स्वयंसेवकहरूको सहयोगले गर्दा समुदायहरूमा राम्रो भएको थियो। यी मध्ये केही समुदायहरूका मतदाताले २०% मत दिएका थिए।
के तपाईं आफ्नो समुदायमा मतदाता संख्या सुधार गर्न मद्दत गर्न चाहानुहुन्छ? तपाईंसँग निर्वाचनको अनुभव हुनुपर्दैन। निर्वाचन स्वयंसेवकहरूले उनीहरूको समुदायमा बोर्डको चुनावको प्रचार गर्न मद्दत गर्न सक्दछन्। यसमा सबै विकी परियोजनाहरूका स्वयंसेवकहरूलाई स्वागत छ! हाम्रो उद्देश्य शीर्ष ३० योग्य मतदाता भएको विकी परियोजनाहरूमा कम्तिमा एक जना निर्वाचन स्वयम्सेवक हुनु रहेको छ। आफ्नो समुदायलाई मतदानमा सहभागि गराएर एक योग्य र राम्रो कार्य सम्पादन गर्ने ट्रस्टीहरूको बोर्ड गठन गर्न मद्दत गर्नुहोस्!
विश्वमा बोर्ड अफ ट्रस्टीको छनौटको बारेमा धेरै छलफलहरू भइरहेका छन्। छलफलमा सहभागी हुनुहोस्!
टेलिग्राम बोर्ड सेलेक्सन च्याट
बोर्ड इलेक्सन फेसिलिएसन टिमले घोषणा तथा अपडेट यहाँ साझा गर्दछ।
दक्षिण एसियाबाट निर्वाचन स्वयंसेवकहरू
यहाँ कडी थप्नुहोस् ताकि अन्य व्यक्तिहरू छलफलमा सहभागि हुन सकुन्
सुबिधा तथा समन्वय टोली
Jackie Koerner- अंग्रेजी भाषा र मेटा-विकीको लागि सुबिधा तथा समन्वय
Oscar Costero- ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रको लागि सुविधा तथा समन्वय
Mahuton Possoupe- फ्रान्सेली भाषाको लागि सुबिधा तथा समन्वय
Zita Zage- उप-सहारा अफ्रीकी क्षेत्रको लागि सुविधा तथा समन्वय
Denis Barthel-जर्मन भाषा र उत्तरी तथा पश्चिमी यूरोप सम्बद्धहरूका लागि सुबिधा तथा समन्वय
Ravan Al-Taie- मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकी क्षेत्रको लागि सुविधा तथा समन्वय
Krishna C. Velaga- दक्षिण एसियाली क्षेत्रको लागि सुविधा तथा समन्वय
Mohammed Bachounda- फ्रान्सेली भाषा र MENA क्षेत्रको लागि सुविधा तथा समन्वय
Mehman Ibragimov- मध्य र पूर्वी यूरोप क्षेत्रको लागि सुविधा तथा समन्वय
Vanj Padilla- पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको लागि सुविधा तथा समन्वय
बोर्ड अफ ट्रस्टी मतदान २०२० बाट सामुदायिक ट्रस्टीका तीन सिटहरू निर्वाचित हुन बाँकी छ। अप्रिल २०२० मा, बोर्डले मतदान प्रक्रिया स्थगित भएको घोषणा गर्यो। बोर्ड अफ ट्रस्टीले अप्रिल २०२१ मा २०२१ को बोर्ड निर्वाचनको योजना घोषणा गर्यो। बोर्डले उक्त निर्वाचनमा विविधता र सहभागिता बढाउन खोज्दै छ।
बढ्दो काम र विकिमिडिया फाउन्डेसनलाई सुचारू गर्न आवश्यक पर्ने विशेषज्ञताको क्षेत्रहरूलाई समेट्नको लागि बोर्डलाई १६ सिटमा विस्तार गरिएको छ। यो विस्तार बाह्य प्रशासन समीक्षा सिफारिसहरूको अनुभागमा आधारित थियो।
३ नयाँ समुदाय र सम्बद्ध-मनोनित सीटहरू
३ नयाँ बोर्ड मनोनित सीटहरू
२०२१ मा चार सीटको लागि छनौटको हुनेछ, बाँकी तीन नवीकरणद्वारा र चौथो अनुमोदित बोर्ड विस्तारबाट पूर्ती गरिने छ। अनुमोदित दुई अन्य नयाँ समुदाय र सम्बद्ध सीटहरू २०२२ मा चयन हुनेछन्, यसका साथै दुई सम्बद्ध सीटहरू (कुल चारवटा) बाँकी रहने छन्।
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Foundation_elections/2021/ne&oldid=21968961"